Vol. 14 DECEMBER, 1911. Tsia
MAMPIKA ny tantara fairy momba ny mpivady taloha izay nandany fotoana betsaka tamin'ny faniriana ny ankizy. Nandritra ny fipetrahan'izy ireo, indray hariva izy ireo, ary, toy ny mahazatra, dia maniry an'ity zavatra ity na izany, niseho ny fairy ary nilaza, fa ny fahafantarana ny faniriany hahazo sitraka ny faniriany dia tonga mba hanome azy telo fotsiny ny faniriany. Faly izy ireo ary tsy nanam-potoana tsy hametrahana ilay fanolorana malala-tanana amin'ny fizahan-toetra, ilay antitra, manome feo ho an'ny faniriana ny fony na ny kibony, raha naniry izy fa manana telon-telo mainty; ary, tena ampy, teo an-tongotrany ny paompy telo mainty. Ilay vehivavy antitra, tezitra mafy ka mandany fotoana be dia be mba hahazoana zavatra noho ny faniriana fotsiny, ary ny nanehoany ny tsy fankasitrahany ny fiheveran-dehilahy taloha, dia naniry izy fa ny papoka mainty dia miraikitra amin'ny orony, ary teo no nikatona azy. Natahotra sao mbola hitohy any ilay lehilahy taloha - naniry ny hidina izany. Ary nataony izany. Lany ilay fairy ary tsy niverina.
Ny ankizy mandre ny tantara dia mahatsapa ho sosotra amin'ilay mpivady taloha, ary amin'ny hatezeram-bahoaka amin'ny fahaverezan'ny kisendrasendra lehibe, toy ilay vehivavy taloha niaraka tamin'ny vadiny. Angamba ny ankizy rehetra izay naheno ny tantara dia nanombatombana izay ho nataony raha nanana izany faniriana telo izany izy ireo.
Ny angano tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny faniriana, ary ny ankamaroan'ny faniriana feno hadalana dia ampahan-tantaran'ny sain'ny foko rehetra. Ny ankizy sy ny loholony dia mety hahita ny tenany sy ny faniriany hita taratra ao amin'ny "Goloshes of Fortune" an'i Hans Christian Andersen.
Ny mpankafy iray dia manana kiraro misy kiraro izay mahatonga ny mpitafy azy ho tonga dia mitondra any amin'izay fotoana sy toerana rehetra ary na inona na inona toe-javatra sy toe-javatra tiany. Mikasa ny hanome fankasitrahana amin'ny zanak'olombelona, ​​dia nametraka ny lalaom-boninkazo teo amin'ny kianjan'ny tranobe izay nivory ny antoko lehibe iray ary nifamaly tamin'ny fanontaniana hoe: ny fotoanan'ny antenantenany dia tsy tsara noho ny azy ireo ihany.
Rehefa nandao ny trano dia nanendry ny Goloshes of Fortune ny mpanolotsaina izay nifidy ny antenantenany fa tsy azy ary mbola mieritreritra ny tohanany fa rehefa nivoaka ny trano izy dia naniry ny tenany tamin'ny andron'i King Hans. Rehefa lasa izy dia telonjato taona, ary raha nandeha izy dia niditra tao anaty fotaka, satria tamin'izany andro izany dia tsy voapaika ny arabe ary tsy fantatra ny sisin-dàlana. Mampatahotra izany, hoy ny mpanolotsaina, rehefa nirotsaka tao anaty fotaka izy ary ankoatra izany dia maty avokoa ny jiro. Nanandrana naka conveyance izy mba hitondra azy tany an-tranony, nefa tsy nisy natao. Ny trano dia ambany sy nirongatra. Tsy nisy tetezana niampita renirano. Nanao hetsika am-pahamendrehana ireo olona ary somary niakanjo hafahafa. Nahatsiaro tena ho niditra tao amin'ny tranom-bahiny izy. Nisy manam-pahaizana avy eo nanao firaisana taminy. Kivy izy ary ory noho ny fampisehoan'izy ireo ny tsy fahalalana, ary tamin'ny hafa rehetra izay hitany. Io no fotoana tsy nahafaly indrindra teo amin'ny fiainako, hoy izy raha nilatsaka teo ambadiky ny latabatra ary niezaka ny handositra ny varavarana, fa ny orinasa no nitazona azy. Nandritra ny tolona nataony dia niravina ny golôzy, ary nahita lalana teny mahazatra izy, ary teo amin'ny lavarangana izay natory mafy ny mpiambina iray. Faly izy tamin'ny nandosirany tamin'ny andron'i King Hans, nitondra kodiarana ilay mpanolotsaina ary dia voaroaka haingana tany an-tranony.
Salama, hoy ny mpitily raha taitra, nisy hipoka baolina roa. Hoy izy ireo, araka ny fetrany. Avy eo izy dia nijery ny varavarankely teny amin'ny teny frantsay izay nipetraka teo ambony rihana, ary nahita jiro sy voafonja mandeha ambony sy ambany. Fa inona ity tontolo milamina ity, hoy ny mpitily. Misy ny lietnétra mandeha ambony sy midina amin'ny efitranony amin'ity ora ity, izay mety ho toy ny ao anaty fandriany mafana no matory. Tsy manam-bady izy, na zanany, ary mety hivoaka sy hifalifaly isan-kariva izy. Lehilahy sambatra! Mirary raha izaho no izy.
Nentina tao anaty vatana avy hatrany ilay mpiambina ary nieritreritra ny teny frantsay ary nahita ny tenany nitsirika teo am-baravarankely ary nibanjina malahelo teo amin'ny taratasy mavokely iray izay nanoratany tononkalo. Efa be fitiavana izy, saingy mahantra izy ka tsy nahita izay fomba nandresen'ilay olona nametrahany ny fitiavany. Niantehitra tamin'ny lohany teo am-baravarankely izy ary nisento. Namirapiratra teo amin'ny vatan'ny mpiambina etsy ambany ny volana. Ah, hoy izy, fa ny olona dia sambatra noho I. Tsy fantany izay tadiaviko, araka ny tiako. Manana trano sy vady aman-janaka izy mba ho tia azy, nefa tsy manana aho. Azoko atao ve ny manana ny anjarany ary mizara ny fiainana miaraka amin'ny faniriana feno fanetren-tena sy fanantenana feno fanetren-tena, mety ho sambatra kokoa noho izaho aho. Manantena aho fa izaho no mpitily.
Niverina tamin'ny vatany ihany ilay mpitily. Endrey izany nofinofy ratsy indrindra izany, hoy izy, ary ny mieritreritra fa izaho no teny frantsay ary tsy nanana ny vady aman-janako sy ny tranoko. Faly aho fa mpitily aho. Saingy mbola teo amin'ny lalao an-tongotra izy. Nitraka tany an-danitra izy, ary nahita kintana nilatsaka. Avy eo dia nitodika tamim-pitandremana ny volana izy.
Ny toerana hafahafa tsy maintsy ho volana, hoy izy. Maniry aho ny hahitako ireo toerana sy zavatra hafahafa tsy maintsy ao.
Vetivety izy dia nentina, saingy nahatsiaro tena ho tsy teo amin'ny toerany. Ny toe-javatra dia tsy nisy toy ny teto an-tany, ary tsy naha-tsy fantatra toy ny zavatra rehetra ny zava-drehetra, ary narary fatratra izy. Teny amin'ny volana izy, fa ny vatany dia teo amin'ny lavarangana izay navelany teo.
Amin'ny firy izao, mpiambina? nanontany mpandalo. Nefa ny sodina dia latsaka avy teny an-tanan'ny mpitily, nefa tsy namaly izy. Nivory teo ny olona, ​​nefa tsy nahaoha azy; Nentin'izy ireo tany amin'ny hopitaly izy ireo, ary noheverin'ny dokotera fa maty izy. Raha nanomana azy handevina azy izy, ny zavatra voalohany dia natao dia ny fanalàna ny basiny, ary avy hatrany dia nifoha ny mpiambina. Andro nahatsiravina izao tamin'ity, hoy izy. Maniry aho fa tsy hiaina fiainana hafa toy izany. Ary raha efa nitsahatra ny naniry, dia angamba tsy ho tanterany mihitsy.
Nandeha an-tongotra ilay mpitily, fa navelany teo ambavony ny amboara. Ankehitriny, nisy mpiambina mpilatsaka an-tsitrapo iray niambina ny famantaranandro tao amin'ny hopitaly tamin'io alina io, ary na dia avy ny orana aza dia te hivoaka vetivety izy. Tsy tiany ampahafantarina ilay vavahady teo am-bavahady fa hiala izy, ka nieritreritra izy fa handalo amin'ny lalantsara vy. Nitaingina ny golosina izy ary niezaka namakivaky ny lalamby. Lehibe loatra ny lohany. Ny mampalahelo anefa, hoy izy. Manantena aho fa afaka nitety ny lalamby ny lohako. Ary dia nataony izany, fa tao aoriana ny vatany. Teo izy nijoro, mba hiezaka araka ny sitrapony, tsy afaka naka ny vatany teny amin'ny ilany izy ary tsy nihemotra tamin'ny làlamby ihany ny lohany. Tsy fantany fa ny golosika napetrany dia ny Goloshes of Fortune. Tao anatin'ny fahasahiranana faran'izay ratsy izy io, satria nirotsaka mafy noho ny taloha ny orana, ary noheveriny fa tsy maintsy miandry hihemotra ao anaty lalamby izy ary hoheverin'ny ankizy mpanao asa soa sy ny olona izay handeha amin'ny maraina. Rehefa avy nijaly ny eritreritra toy izany, ary ny fiezahana rehetra hanafaka ny tenany amin'ny fanaovana ny zava-poana, dia naniry ny hisian'ny lohany indray izy; ary dia toy izany. Taorian'ny faniriana maro hafa nahatonga azy hanelingelina azy, dia nanala ny Goloshes of Fortune ilay mpirotsaka an-tsitrapo.
Nentina tany amin'ny paositry ny polisy ireo pôlitika ireo, izay nandiso azy ireo ho azy manokana, napetraky ny mpitandrina mpamoaka azy ary nandeha an-tongotra. Rehefa avy naniry ny tenany ho poeta sy mangetaheta izy, ary niaina ny eritreritra sy ny fihetseham-po tamin'ny poeta, ary ny fahatsapana an-jaza teo an-tsaha sy ny fahababoana dia naniry ihany izy ary nahita ny tenany teo amin'ny latabany tao an-tranony.
Fa ny tsara indrindra Goloshes of Fortune dia nitondra ho an'ny mpianatra teolojia tanora, izay nandondona teo am-baravaran'ny mpitantsoratra fanaovana copie ny maraina taorian'ilay zavatra niainany ny poeta sy ny fika.
Midira, hoy ny mpitety kopika. Arahaba, hoy ny mpianatra. Maraina maraina be izany ary tiako ny hiditra ao anaty zaridaina fa mando ny ahitra. Afaka mahazo ny fampiasana ny golôsinao ve aho? Azo antoka fa, hoy ny mpitan-tsoratra ara-kopy, ary ny mpianatra no nametraka azy ireo.
Tao amin'ny zaridainany dia ny rindrin'ny tery tery no nofehezin'ny mpianatra. Andro mahafinaritra izany lohataona izany ary ny eritreriny dia nitodika tany amin'ny firenena tadiaviny hahita, ary nitomany mafy izy, Oh, enga anie ka mba mandalo any Soisa, sy Italia aho ary. —— Nefa tsy naniry intsony izy, satria teo no ho eo amin'ny mpanazatra filokana niaraka tamin'ny mpandeha hafa, tany an-tendrombohitra Switzerland. Faly sy narary izy sady natahotra ny fahaverezan'ny pasipaoro, vola sy fananana hafa, ary nangatsiaka ihany. Tena tsy mifanaraka izany, hoy izy. Maniry aho fa any an-dafin'ny tendrombohitra, any Italia, izay mafana ny andro. Ary mazava ho azy ireo.
Ny voninkazo, ny hazo, ny vorona, ny farihy any an-tsaha misavoana eny an-tsaha, ny tendrombohitra miakatra eo an-daniny ary manakaiky ny lavitra, ary ny tara-pahazavana volamena mipetaka ho voninahitra noho ny rehetra, dia nahatonga fijery mahafinaritra. Fa vovoka, mafana ary malefaka ao amin'ny mpanazatra. Ny sidina sy ny moka dia nanindrona ny mpandeha rehetra ary niteraka fofona be teo amin'ny tavany; ary foana ny kibony ary vizana ny vatana. Ny mpangataka tsy misy faniriana ratsy dia nanemitra azy ireo teny an-dàlana ary nanaraka azy ireo tany amin'ny trano fandraisam-bahiny mahantra sy irery. Nianjerain’ny anjaran’ny mpianatra ny fijeriny raha natory ny mpandeha hafa, fa raha tsy izany dia efa nandroba avokoa izay nananany. Na eo aza ny bibikely sy ny fofona manelingelina azy, dia niteniteny ilay mpianatra. Ho tsara tokoa ny fitsangatsanganana, hoy izy, raha tsy an'ny vatan'ny olona iray. Na aiza na aiza aleha na izay mety ataoko dia mbola misy filana ao am-poko. Tsy ny vatana no manakana ny fitadiavako izany. Raha miala sasatra ny vatako ary afaka ny saiko, tsy tokony hisalasala hahita tanjona sambatra aho. Ny faran'ny farany no mahafaly indrindra.
Dia tonga tany an-trano izy avy eo. Nosintonina ny ambainy. Ao afovoan'ny efitranony dia nisy vatam-paty. Tao no nandriany natory ny torimason'ny fahafatesana. Nilamina ny vatany ary nitombo ny fanahiny.
Tao amin'ny efitrano dia nisy endrika roa nihetsika mangingina. Izy ireo dia fahasambarana Fairy izay nitondra ny Goloshes of Fortune, ary ny angano hafa antsoina hoe Care.
Jereo, inona ny fahasambaran'ny hatsaranao amin'ny lehilahy? hoy i Care.
Na izany aza dia efa nandray soa ry zareo izay efa eto, hoy ny Fairy of fahasambarana.
Tsia, hoy i Care, fa izy irery. Tsy nantsoina izy. Hahazo sitraka aminy aho.
Nesoriny ny tongony teny an-tongony ary nifoha ilay mpianatra ary nifoha. Ary dia nanjavona ilay fairy ary naka ny Goloshes Fortune niaraka taminy.
Tsara vintana fa tsy manana ny Goloshes of Fortune ny olona, ​​raha tsy izany dia mety hitondra fahavoazana lehibe kokoa ho azy ireo amin'ny alalàn'ny fitafiany azy ireo ary hahazoana sitraka amin'ny sitrapony haingana kokoa noho ny lalàna izay avelantsika hiaina.
Rehefa zaza dia ampahany lehibe amin'ny fiainantsika no irahina maniry. Amin'ny fiainana taty aoriana, rehefa mendrika ny fitsarana dia matotra isika, toy ireo mpivady taloha sy ireo tia ny karaoty, dia mandany fotoana be amin'ny faniriana, amin'ny tsy fahafaham-po sy ny fahadisoam-panantenana, amin'ireo zavatra azontsika sy ny naniriantsika, ary ireo nenina tsy misy dikany satria tsy mila zavatra hafa.
Ny faniriana amin'ny ankapobeny dia ekena ho tsy fady, ary maro no mihevitra fa tsy fanirian'ny zavatra maniry ary tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany. Saingy ireo fiheverana diso ireo. Misy fiantraikany amin'ny fiainantsika ny faniriana ary zava-dehibe ny tokony hahafantarantsika hoe ahoana ny faniriana faniriana sy fiantraikany amin'ny vokatra sasany eo amin'ny fiainantsika. Ny olona sasany dia voatosika kokoa noho ny faniriany noho ny hafa. Ny fahasamihafana amin'ny vokatry ny fanirian'ny olona iray avy amin'ny faniriana iray hafa dia miankina amin'ny tsy fahalemena na ny herin'ny fisainany, ny haavony sy ny kalitaon'ny faniriany, ary ny fiaviany ny antony nanosika azy sy ny eritreritra ary ny zavatra nataony mamorona ny tantarany.
Ny faniriana dia kilalao iray eo anelanelan'ny saina sy ny faniriana manodidina ny faniriana sasany. Ny faniriana dia faniriam-po nambara. Ny fanamorana dia tsy mitovy amin'ny fisafidianana sy fisafidianana. Ny fisafidianana sy ny fisafidianana zavatra iray dia mitaky fampitahana ny eritreritra eo anelanelan'izany sy zavatra hafa, ary ny safidy dia miteraka ilay zavatra voafidy noho ny zavatra hafa nampitaha azy. Amin'ny faniriana, ny faniriana dia manosika ny eritreritra mankany amin'ny zavatra iray izay iriny, tsy mijanona mampitaha azy amin'ny zavatra hafa. Ny faniriana aseho dia ny tanjon'ny faniriana. Ny faniriana dia mahazo ny heriny ary teraka avy amin'ny faniriana, fa ny eritreritra dia manome endrika.
Izay manao ny fisainany alohan'ny hitenenana, ary izay miteny aorian'ny fisainana ihany, dia tsy mora amin'ny finiavana toa ilay miteny alohan'ny hieritreretana sy ny fiteniny no fomban'ny masony. Raha ny marina, dia tsy maniry fatratra ny olona iray efa zatra traikefa ary efa nandray soa tamin'ny zavatra niainany. Ireo zava-baovao ao amin'ny sekolin'ny fiainana, dia maniry finaritra betsaka. Ny fiainan'ny maro dia fizotry ny faniriana, ary ny mari-pamantarana amin'ny fiainany, toy ny harena, fianakaviana, namana, toerana, toerana, toe-javatra sy fepetra, dia endrika sy hetsika amin'ny dingana mifandimby ho valin'ny faniriany.
Ny faniriana dia mahaliana amin'ny zavatra rehetra izay toa manintona, toy ny fanesorana ny kilema tsy azo antoka, na ny fahazoana mamba, na ny tompon'ny tany sy ny harena, na ny manao ampaham-barotra eo imason'ny besinimaro. ary izany rehetra izany dia tsy misy drafitra amin'ny hetsika mazava. Ny faniriana indrindra indrindra dia ny fifandraisany amin'ny vatan'ny tenany sy ny filany, toy ny faniriana sakafo sakafo, na hahazoana fofom-pitiavana, faniriana peratra, firavaka, volon-bolo, akanjo, akanjo, akanjo, manana fahazoana fahafaham-po, hanana fiara, sambo, trano; ary ireo faniriana ireo dia miitatra amin'ny hafa, toy ny faniriana tiana, hialona, ​​hajaina, ho malaza ary hanana fahefana ambony an'izao tontolo izao mihoatra ny hafa. Fa isaky ny mahazo ny zavatra tadiaviny ny olona dia mahita fa tsy mahafa-po tanteraka azy izany zavatra izany ary maniry zavatra hafa.
Ireo izay efa nanana traikefa momba ny faniriana an'izao tontolo izao sy ara-batana ary mahita azy ireo ho lasa evanjelatra sy tsy azo itokisana na dia efa azo, maniry hahonon-tena, ho mahonon-tena, ho feno hatsaram-panahy ary hendry. Rehefa mitodika amin'ny lohahevitra toy izany ny faniriana ny olona iray, dia mijanona ny faniriana sy manandrana ny fahazoana izany izy amin'ny fanaovana izay heveriny fa hampivoatra hatsarana ary hitondra fahendrena.
Ny karazana faniriana iray hafa dia ny tsy fiahian'ny olona manokana, fa mifandray amin'ny hafa, toy ny maniry ny hahasitran'ny olon-kafa ny fahasalamany, na ny harenany, na ny fahombiazan'ny orinasam-barotra sasany, na ny fahazoany fifehezan-tena. mahay manitsy ny toetrany ary mampitombo ny sainy.
Ireo karazana faniriana rehetra ireo dia misy fiantraikany sy fiantraikany manokana, izay voafaritra amin'ny alàlan'ny habetsaky ny faniriana sy ny hatsaran'ny fanahiny, ny kalitao sy ny herin'ny sainy ary ny hery omena azy ireo amin'ny alàlan'ny eritreriny sy ny zavatra nataony taloha izay manome taratry ny faniriany ankehitriny. ny ho avy.
Misy fomba faniriana mivelatra na fanatanjahantena, ary fomba iray izay matotra kokoa ary antsoina indraindray hoe siantifika. Ny fomba malalaka dia ny fanirian'ny olona iray izay mieritreritra ao an-tsainy ary mamely ny hatsarany, na ny zavatra naroson'ny sainy sy ny faniriany. Manantena fiara, yacht, iray tapitrisa dolara, trano lehibe, trano lehibe ao amin'ny firenena izy, ary miaraka amin'ny fahatoniana rehefa mangataka boaty sifotra izy, ary ny namany Tom Jones dia handoa azy mitsidika iny hariva iny. Tsy misy famaritana momba ny fomba faniriany maloto na zaza. Ny olona miketrika ao dia toa maniry zavatra hafa ho an'ny zavatra hafa. Dia mitsambikina avy hatrany izy fa tsy mitovy hevitra na fomba fiasa amin'ny fanaony.
Indraindray ilay masira hendry dia hijery tsara ao anaty vava, ary avy amin'io toerana io dia manomboka maniry sy hijery ny tranoben'ny lapa, ary avy eo dia manantena karazana fiainana hafa miaraka amin'ny tampotampony izay ny gidro iray mihantona eo amin'ny rambony, ny fikorohany mijery sy mitady hendry, avy eo hitsambikina mankany amin'ny tongotra manaraka ary manomboka hiresaka. Ity karazana faniriana ity dia atao amin'ny antsasaky ny fomba mahatsiaro tena.
Izay manandrana mampihatra fomba amin'ny faniriany, dia mahatakatra sy maniry ny zavatra tadiaviny ary izay tadiaviny Toy ny amin'ny hendry malala, ny faniriany dia mety hanomboka amin'ny zavatra tadiaviny. Fa miaraka aminy kosa izy io dia hivoatra avy ao anaty fahalalany ho lasa filana voafaritra. Avy eo dia hanomboka hanoanana azy izy, ary ny faniriany dia hipetraka ao anaty faniriana tsy miangatra sy faniriana mafy ary mitaky mafy ny hahatanteraka ny faniriany, araka ny efa notononin'ny sekoly ambaratonga mpahay hendry, "Ny lalàna. ny Hanan-dàlana. ”Ny hendry miaraka amin'ny fomba mazàna dia mivoaka araka ny paikady vaovao, izany hoe, manambara ny faniriany ary miantso sy mitaky ny lalàny fihoaram-pefy. Ny fiangaviana dia ny hoe misy eto amin'izao tontolo izao be dia be ny zava-drehetra ho an'ny rehetra, ary anjarany ny miantso avy amin'ny haben'ny anjara tadiaviny sy ny nambarany ankehitriny.
Rehefa avy nanamafy ny zony izy ary nilaza fa nahatratra ny faniriany. Izany dia ataon'izy ireo amin'ny faniriana maharitra sy faniriana mafy ho an'ny fahafaham-po ny faniriany, ary amin'ny fisintonana tsy an-kiato ny faniriany sy ny fisainany momba ny famatsiana iraisan'ny rehetra manerana izao tontolo izao, mandra-pahafa-po ny fahafaham-po tsy manam-petra amin'ny faniriany. Tsy ny hendry indrindra, araka ny fomba fiasa vaovao, dia nankasitraka ny faniriany, na dia mahalana aza izy raha mahazo ny zavatra tadiaviny, ary amin'ny fomba itiavany azy. Raha ny marina, ny fomba fahatongavan'izy ireo dia miteraka alahelo be dia be, ary maniry izy fa tsy notadiaviny, fa tsy hiaritra ny fahavoazana entin'ny fanararaotana.
Ity ny ohatra iray momba ny hadalana faniriana maharitra amin'ny ataon'ireo milaza ho mahalala nefa tsy mahalala ny lalàna, dia izao manaraka izao:
Tamin'ny resaka iray momba ny tsy fetezan'ny fanirian'ny tsy fahalalana sy ny fomba fangatahana sy faniriana notarihin'ny maro amin'ireo krizy vaovao, hoy ny olona iray izay nihaino tamim-pahalianana: «Tsy mifanaraka amin'ny mpandahateny aho. Mino aho fa manan-jo hitaky izay tiako. Mila roa arivo dolara fotsiny aho, ary mino aho raha manohy ny faniriako azy dia hahazo izany. ” "Madama," hoy ny navalin'ilay voalohany, "tsy misy mahasakana anao ny faniriana, fa tsy ho maika. Betsaka no nanana antony hanenenany ny fanirian'izy ireo noho ny antony nanirahana azy ireo. ” "Tsy mitovy hevitra aminao aho", hoy izy nanohitra. “Mino ny lalànan'ny fanetren-tena aho. Mahafantatra olona hafa aho izay nitaky an'io lalàna io, ary tamin'ny fahatongavan'izao rehetra izao dia efa tanteraka ny faniriany. Tsy mijery ny fomba hahatongavany aho, fa mila roa arivo dolara. Amin'ny faniriako azy sy ny fangatahana azy dia matoky aho fa hahazo izany. ” Volana vitsivitsy taty aoriana dia niverina izy, ary tsikariny ny tarehiny, dia nanontany ilay olona noteneniny hoe: "Madama, efa nirinao ve ny fanirianao?" "Nataoko izany", hoy izy. "Ary afa-po ve ianao?" hoy izy nanontany. "Tsia", hoy ny navaliny. "Fantatro anefa izao fa tsy fahendrena ny faniriako." "Fa nahoana?" hoy izy nanontany. "Eny," hoy izy nanazava. “Manana fiantohana mandritra ny roa arivo dolara ny vadiko. Ny fiantohana azoko izany. ”
(Raha fehin-kevitra amin'ny faran'ny Janoary ny Tenin'ny Janoary.)